Amandla oMbane | PIVX
Njengoko i-cryptocurrencies ziqhubeka ukuqhuma ngo-2018, silindele ukuba ulwazi oluninzi lukhanyiswe malunga nokusetyenziswa kwamandla ombane kwezi projekthi kunye nokuzama. Nangona kukho ukuqajisela olunintsi malunga ne-bitcoin, yinyaniso yokusetyenziswa kwamandla wombane, njalo njalo, ndicinga ukuba kuphephile ukutsho ukuba akuyona into enobungane xa ivela ekusebenziseni amandla.
Thina kwi-PIVX sithathe inkcazo ecacileyo kwindlela yokusetyenziswa kwamandla enethiwekhi yethu yonke. Oko kuthetha ukuthini, kusetyenziswa iziguquko ezininzi kunye nezibalo eziwayo ukubonelela ukusetyenziswa kwamandla kwi-PIVX. Ezi ziguquko zibekwe ngezantsi ngezantsi:
Ngobungqina beeNgqekembe zomSebenzi (njenge-bitcoin), amandla agqitywa ngeendlela ezimbalwa:
– Iikhomputha ezisebenzelayo i-Running Full Nodes (Ezi zibizwa ngokuba zizikhwama ezinkulu).
Ngobungqina beemali zeentente (PIVX), amandla adliwe:
– Iikhomputha ezisebenzela izakhi ezipheleleyo (iipoklethi eziphambili eziqhuba i-blockchain kunye ne-staking).
I-Bitcoin inama-“nodes” ejikelezayo ayi-10,000.
Kunzima ukuqikelela ukuba zininzi iikhompyutheni ezizimeleyo. Siyazi ukuba kukho ii-2100 iinombolo ezisuka kumasternodes esebenza. Ukujonga iziphumo, kuqikeleleka ukuba kukho i-8000 okanye i-wallets. Ngaloo ndlela xa kuthelekiswa, siya kuthi kukho ezili-10 eziyi-nodes ezigcweleyo zePIVX.
Ngaloo ndlela, ekubeni amandla okuphela kuphela asetyenziswayo kwi-PIVX yimiba ephambili yekhredithi, kufuneka sijonge ukusetyenziswa kwamandla weekhompyutheni / iipottops eziqhelekileyo kwaye uhambe apho.
Ikhompyutheni ye-Laptop ebonakalayo ehamba kakuhle 12 W / Hr.
Esi sibalo sisiseko sobala kwaye kunzima ukufumana kodwa sasebenzisa oku (khangela iphepha 4)
Sahlula umehluko phakathi kweWindows kwi-Idle neGcwele epheleleyo.
I-PIVX Primary (i-wallet) isebenzisa kuphela amandla amathathu% ngoko kusebenza ngokungenzi lutho.
Uninzi lwamandla asetyenziso luvela ekusebenzeni i-processor kanzima (ukudlala) okanye isikrini sikhona.
NOKUSEBENZA: Ngama-Nodes apheleleyo ayi-10 000 (oku kuthetha ukuba i-10,000 wallet esebenza) I-PIVX ingaba yi-120 KwH yamandla okanye i-0.12 i-MwH yemveliso yamandla.
Umoya we-Window u-35% Uveliso lwe-2.5 MW Wind Turbine – 0.875 ukuvelisa kwe-MwH, ngoko-1/6 ye-Wind Turbine eyi-average power generation.
Ubungakanani obuqhelekileyo bokufakelwa kwelanga kwiplanga
Ngoko xa ilanga liphumayo, iinkqubo ezili-15 zohla lwelanga ziza kunika amandla inethiwekhi yonke ye-PIVX (i-nodes ezipheleleyo ezili-10 000).
Ngoko masithi ngonyaka ongu-1, sinamaziko angama-100 000 apheleleyo ejikelezayo kwihlabathi (ebonakalayo).
Oko kuthetha ukuba kuya kuthatha umkhiqizo ovela kwi-turbine 2 zomoya ukulawula inethiwekhi yonke, okanye ukufakelwa kwelanga ezili-150.